Munamato weKutengesa Imba. ? Mutsvene Joseph naMwari Pai
Munamato wekutengesa imba. Kufunga munamato mune zvese zvikumbiro nezviito zvinounzwa kwatiri zuva nezuva zvakakosha. Saka kana tichida imwe munamato wekutengesa imba Tinofanira kuziva maitiro ekutsvaga mutsara chaiwo wekuita.
Kune minamato yechinhu chiri chose chatinoda uye kutengesa imba, pasina kupokana, maitiro atinoda iko kutungamira kwechisimba kunotitungamira kuita sarudzo dzakanaka sezvo dzisingafanirwe kutorwa zvisiri nyore.
Mumunamato isu tinowana rugare nehungwaru, izvo chete zvatinoda kuti tiite zvakanaka.
1 Munamato wekutengesa imba wakasimba here?
1.1 Namata kuna San José kutengesa imba
1.2 Munamato wekutengesa imba yakatengeswa zvakanaka
2 Ndingataure ese mitsara?
Munamato wekutengesa imba wakasimba here?
Munamato une simba, kunyangwe iwe unozviita kupi kana nguva yacho, munamato uchagara uri chombo chedu chakanakisa uye chishandiso icho chinotibatsira kutsvaga nzira dzekubuda kunyange mune idzo kesi dzatinofunga kuti hapana.
Uye zvakanyatsoitika muzviitiko izvi zvakanyanya kuoma apo munamato une simba kwazvo.
Kutengeswa kweimba kunogona kuva nezvimwe zvinonetsa, nguva zhinji kuri madikanwa kutengesa nekukurumidza uye zvinonakidza kuwana munhu anofarira chaizvo kutenga imba, mune izvi zviitiko hapana chinhu chiri nani kupfuura munamato wekugona kuitengesa munguva rekodhi.
Hakuna chinhu icho munamato haugone kuwana uye ichi ichokwadi.
Kana, pane zvinopesana, izvo zvinotsvaga ndeyekuzvitengesa kune mumwe munhu anozvitarisira izvo zvatingazvipe, sezvo imba yacho pachayo iine hunhu hukuru, saka kutsvaga kwemutengi kunozonyanya kuoma.
Munamato inogona kuita kuti mutengi wataitarisira aoneke, iyo inoenderana nemutengo uye iyo inopa imba kutarisirwa uye kuonga kwakakodzera kudzivirira kuora kwayo.
Kuisa rutendo rwese musimba remunamato kunotipa simba rakakosha kumirira chishamiso chatiri kuda.
Namata kuna San José kutengesa imba
Ah, zvinoshamisa Musande Joseph, Iwe wakadzidziswa naIshe basa remubatiri, Uye zvakasimbiswa kuti iwe wagadziriswa nekusingaperi, Inzwa kuda kwangu nemoyo wose.
Ndiri kuda kuti mundibatsirewo ikozvino Kubatsira kwawakaita mwanakomana wako wekurerwa Jesu, Uye sewe netsika dzako neunyanzvi Wakabatsira vamwe vakawanda pazamai pekugara. Ini ndinoshuva kutengesa ichi (chakatumidzwa imba kana chivakwa) Mukukurumidza, nyore uye nenzira inobatsira.
Uye ndinokukumbira iwe kuti uite chishuwo changu Kusvikira akanaka mutengi, Ndiani anoda, uye anogadzira, Uye unondigamuchira kuti hapana chinomisa kupedzisa kwekutengesa.
Wadiwa Musande Joseph, Ndinoziva kuti unondiitira iyi Ndinzwirewo moyo wako Uye munguva yazvo yakazara, Asi huni hwangu hwanyanya kwazvo zvino Uye hunofanira kuitwa nekukasira.
Mutsvene Joseph, ini ndichaisa pachangu mamiriro akaoma Ndiwe musoro wangu wakaiswa murima Uye ini ndichatsungirira sekutsungirira kwedu, Tenzi wedu, Kusvikira izvi (imba kana zvivakwa zvichitsiviwa) zvapera.
Tinokukumbirisa kuti utungamirire vatengi vanodiwa, kuti tikwanise kuita kutengeserana kwacho nehurongwa hwakanaka kune vaviri mapato, uye nekukurumidza sezvinobvira.
Ipapo, Mutsvene Joseph, ndinozvisimbisa pamberi paIshe wedu mukuru Kuti muchaunganidza kutenda kwangu kusingaperi Uye Ndichatakura zita renyu nyoro pamiromo yangu Kwese kwandinoenda.
San José ndiye Musande kwatiri watinofanira kuenda naye kuzviitiko izvi sezvo iye, semuvezi, anoziva kukosha kungave neazvivakwa muhupenyu hwedu.
Kutaura naye kunogona kutibatsira kuwana mhinduro yataive takamirira, yeuka kuti munamato une simba uye kana, nekuwedzera, isu tinozviita nekuve ipapo ipapo zvine simba rakanyanya.
Hatigone kuenda kune chero musande kusahadzika kwesimba ravo kana kushanda kwavo asi pane zvinopesana, isu tinofanira kuvimba uye kutenda kuti chimwe nechimwe chazvo chinogona kutibatsira kuwana mhinduro kune imwe neimwe yezvinotinetsa.
La munamato kuna Mutsvene Joseph kutengesa imba kunoshanda uye kunoshamisa.
Munamato wekutengesa imba yakatengeswa zvakanaka
Baba Mwari ndinokutendai nekundikomborera nemba ino. Ndatenda nemafaro andakawana kubva kwaari mukati memakore andagara pano. Ndiratidze zvandinoda kuita kuti igadzirire kutengeswa.
Ndinonamata kuti imba yangu itengese nekukurumidza. Ini handichazombotyori mumoyo mangu nekuti ndoziva iwe une chauri mutengi mutsara wekutenga.
Ndinokumbira kuti mundipewo unyoro hwekuti ndive akatendeseka uye kwete makaro pane zvandiri kukumbira.
Ndinoziva kuti ndinongoda mutengi uye ndinokumbira kuti utumire nekukurumidza. Ndinovimbisa kukupa zvichienderana nekuwedzera kwaunounza kubva pakutengesa uku nekukudza mubhizinesi iri.
Ini ndinonamatirawo nzvimbo nyowani yamunonditora.
Dai mandigadzirira kuti ndiwane mufaro wakawanda nerunyararo mumusha mutsva uyu, muzita raJesu, rudo.
Munamato wekutora mushe mushe pakutengesa imba unofanirwa kuyerera zvakachena uye nenzira kwayo kubva mukati medu kusvika kune iye musheti kwaari
Ndokusaka zvichikurudzirwa kuita kuchenesa kwemukati nepamweya imba iyo yatiri kuda kutengesa nechinangwa chekubvisa zvese zvinotadzisa chibvumirano chakanaka mukutengesa.
Ndingataure ese mitsara?
Vanhu vazhinji vanotya kunyengetera kupfuura munamato. Mune ino kesi usanetseka.
Anogona uye anofanira kunyengetera ari maviri minamato pasina dambudziko.
Chero munamato wekutengesa imba une simba uye unofanirwa kunamatirwa kakawanda sezvaunoda.
Chinhu chakakosha ndechekuti iwe utende muna Mwari uye muSan José.
Izvo chete neiyi nzira izvi vatsvene vaviri vachakubatsira iwe nenyasha dzako.